Oromo News 07.14.21 | KWIT
Bahena River May keessa Tibbetts 2018 murtii first-degree dhan irrati murtaahe ture.
Governor South Dakota Kristi Noem mana murtii naanicha warra bulchan kaabine naanicha kan ta’an fi Sioux Falls keessati dura buaa mana hidhaa kan jiruu nama hin beekamen bakka dalgaati dhoogam jira.
Qirreetan isaa correction officer warra waliin hojattan waliin dhiiba saala akka godhan himan.
Case Covid-19 haarawa U.S keessati guyyaadhan harka lamaan torbaan sadiin darban keessa akka dabalaa jiru himan. Kunnis virus delta variant baaye kan baayachu jiruu, fi talaali baaya xiqqaata dhufaachu isaa himan.
Namni guyyaa wiyxataa qabame averge dhaan gara nama 23,600 akka taeefi, June 23 irraa 11,300 ol dabalee jira. Garuu martinuu state lama malee innis South Dakota fi Maine akka gabaasanitti torbaan lamaan darbe keessa irra akka daba;e gabaasani jiran magalaan naanicha kan garii talaali corona virus akka fudhtaniif yaalu jiru.
Jiraattoni Iowa qixxee ta’an percent 49% talaali Covid-19 kan fudhatan yoo tau, Nebraska 48.5% fi South Dakota 46% kan fudhatan akka tae himan.